Yintoni ekhetheke kangaka malunga noLuntu lweendaba? | Martech Zone
Yintoni ekhetheke kangaka malunga neMidiya yokuncokola?
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 2, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo, ndikhankanyile esinye sezizathu imidiya yokuncokola yayisilela Abathengisi abaninzi kungenxa yokuba asichazanga ialgorithm yomlingo. Ndicinga ukuba akukho algorithm yomlingo… kodwa emva kwale veki, ndingakhomba kolunye lweempawu ezizodwa zemidiya yoluntu. Ngu ubungozi.
Icandelo elilandelayo luhlobo lobuqu… ke ukuba uziva ininzi kakhulu, tsibela kwicandelo elilandela oko!
Malunga nokusweleka kukaTatomkhulu wam
Le nyanga ibinzima. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ndingcwabe umhlobo olungileyo ovela kwisikolo samabanga aphakamileyo. Kwaye izolo, besingcwaba usolusapho nosapho endabizwa ngaye, utat'omkhulu, UDouglas Morley. Ndiyazi abantu abaninzi banotatomkhulu nootatomkhulu… kodwa utatomkhulu wam wayengumntu owahlukileyo. Wabhalisa kwiRoyal Army yaseCanada kwaye wakhonza kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Wayeyingcali yeziqhushumbisi, wagunyaziswa kwaye wadla umhlala phantsi kwinqanaba le-Captain. Ngexesha apho kwakungathandwa kakhulu, wakhetha ukutshata umfazi omhle ongumJuda-uMakhulu wam, uSylvia.
Umakhulu wam wayengumfazi owahlukileyo, owomeleleyo ngokunjalo. Kude kube sekuswelekeni kwakhe ngo-2003, wayeyintsapho ethe cwaka yosapho. Ngelixa utat'omkhulu wayekhonza kulo lonke elaseYurophu, umakhulu wam wakhula waba yinkampani ephumeleleyo-eyayingekaziwa ngelo xesha. Utat'omkhulu wayekhonza umakhulu wam…. kwaye anditsho kancinci. Xa utatomkhulu wam waswelekelwa ngumfazi emva kweminyaka engama-58 yomtshato omnandi, wayibhala loo nto amaphiko awayemncedile ukubhabha ubomi bakhe bonke ayesikiwe. Andiqinisekanga ukuba ndakhe ndayibona indoda eyayizinikele ngokungazenzisiyo, ngokungazingci ezinikele emfazini wayo.
Njengokuba impilo yakhe yasilela, onke amathuba okulinda umakhulu wam atsibelwa ngutatomkhulu wam. Akazange athandabuze-nditsho nangeengxaki zakhe zangasemva kunye nemicimbi yezempilo. Xa izinto zaba nzima kakhulu, wambeka kwindawo yokunyamekela abagulayo. Iintsuku emva koko, wayengayithandi indlela anakekelwa ngayo kwaye waseta igumbi ekhaya. Wayekuye ecaleni kwebhedi yakhe imini nobusuku. Wayenabantu abaza kwenza iinzipho neenwele zakhe, naye. Kwakungekho nto imfutshane ngokumangalisayo.
Emngcwabeni, ndadibana nabantu abaninzi ababebachukumisile utat'omkhulu. Njengomntu osebenza egadini owayengasithethi isiNgesi esasihoye umzi kayisemkhulu. Zange ndazi ukuba utat'omkhulu wayexhase ngemali ishishini lendoda. Ndadibana nomgcini wakhe, umfazi wase-Afrika wase-Afrika owayekhala ngebhokisi yakhe kwaye wandixelela ukuba akazange azive ethandwa nangubani na. Ndadibana noRabi wakhe, owaqhubeka nokufunda naye emva kokuba umakhulu ephumelele (nangona wayehlala eyiProtestanti). Kwakukho abantu abavela kwihlabathi liphela abaze okanye abathumele amazwi ovelwano. AbaMason beza kwaye banikela imikhosi yabo ndlelantle kubhuti. Ilungu loMkhosi waseMerika leza lahlonipha elinye igqala elaphulukana nesona sizukulwana sikhulu.
Utatomkhulu wam wangcwatywa enxibe iyunifomu yakhe… kwaye wayehlala ehlekisa, wangcwatywa nentsimbi yentsimbi ayicelileyo xa evukile (uxelele umzukulwana wakhe omkhulu ukuba uza kuyibiyela ngokungacwangciswanga xa UMama watyelela emangcwabeni!). Emva kokudlala kwebhippiper UThixo asindise ukumkanikazi kwaye Iposi yokugqibela… Iibhippipes zikhanyiswe ngoguqulelo olumangalisayo lwe Hava Nagila. Sonke savuya sahleka, sonke salila iinyembezi… kwaye sonke sancuma saza savalelisa kwindoda engakholelekiyo.
Andiqinisekanga ukuba nabani na uye wanikwa irhafu engaqhelekanga kwaye engummangaliso. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uMama wam, owayemkhathalele ngokungakhathali imini nobusuku kule minyaka imbalwa idlulileyo, ucwangcise le fairwell intle.
Buyela kwiMidiya yoLuntu
Xa ndibhalayo ukuba utatomkhulu wam udlulile kuFacebook, amakhulu abantu athatha ixesha lokunika izimvo. Ndifumene unogumbe we-imeyile, imiyalezo ebhaliweyo, ii-tweets, iifowuni kunye namanqaku akho. Khange ndithathe nxaxheba kuninzi ukusukela ngoko… usapho yeyona nto iphambili ngoku kwaye ndixhasa uMama wam (okuphela komntwana) yeyona nto bendijonge kuyo. Abathengi bam, abahlobo kunye nabalandeli bonke baye bandixhasa kuphele ixesha ukusuka ekuhlaleni. Amagama awakwazi ukuchaza indlela endibethwa ngumoya ngayo ngabantu bakuthi. Enkosi.
Andibhali nenye yale nto yovelwano okanye uvelwano… bendifuna ukulandela nje xa ndinokwabelana nani bantu kutheni ndithule. Ndiyakholelwa ukuba ubomi bukatat'omkhulu budinga ukwabelwana kwaye kubhiyozelwe, hayi ukulilwa.
Kananjalo, indenze ndayiqonda into enokuba ikhetheke kangaka kwimidiya yoluntu. Ndihleli ndinexesha elinzima ngegama Nxaxheba… Iyaqala ukuvakala ilungiselelwe kwaye yenziwe. Ukuxhatshazwa ayifani nokubandakanya. Uthethathethwano lwenzeka phakathi kwamaqela amabini azimiseleyo… ukuba sesichengeni kwenzeka xa elinye iqela livula elinye kwelinye. Ukuba sesichengeni kunokukuvula ukuba ugculelwe, ugculelwe kwaye ugxekwe. Kodwa okona kubaluleke ngakumbi, ukuba sesichengeni kukuvula ukuze uqhagamshele kwinqanaba kunye nabaphulaphuli bakho ekungekho nanye indlela yonxibelelwano enokubonelela ngayo. Ukuba semngciphekweni akunakubhalwa nakwisiphi iskripthi sentengiso.
Yiloo nto ibaluleke kakhulu kwimidiya yoluntu.
Ukujonga kwangaphambili: Inguqulelo kaGoogle yoHlelo 5
Uyenza njani into yokuKhangela kuKhuphelo lweendaba kuKhangelo
Epreli 2, 2011 ngo-9: 00 AM
Uxolo lwam olunyanisekileyo mhlobo wam. UTatomkhulu wakho uvakala njengendoda emangalisayo. Ndinqwenela ukuba ndibenenyhweba yokudibana naye. Nibe nethamsanqa lokwazi utatomkhulu nomakhulu wakho. Owam wasweleka ndisemncinci kakhulu ukuba ndingakhumbula. Zixabise kakhulu iinkumbulo.
Epreli 2, 2011 ngo-2: 55 PM
Enkosi BB! Wayengumfana omkhulu kunye nothanda ilizwe laseKhanada!
Epreli 2, 2011 ngo-9: 42 AM
Ndiye kwintengiso iminyaka engama-30. Imithombo yeendaba kwezentlalo isebenza kuphela xa kukho uthethathethwano oluthe ngqo kunye nonxibelelwano lwenene. Ndikufumanisa kuhlekisa ukuba ihlala iphathwa njengembumbulu yomlingo. Ngaphandle kothethathethwano kunye nonxibelelwano lokwenyani ngumthambo ongenamsebenzi. Inani labalandeli lilandela kumgangatho wokuzibandakanya.